August 2021 – Grab Love Story
“….မမအေး…..မမအေး…..”၁၈နှစ်၁၉နှစ်ခန့်ရှိအသားဖြူဖြူ…….လူရည်ချောလေးမောင်မောင်အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ အပြေးအလွှားတက်လာရင်း နှုတ်မှတကြော်ကြော်အော်ခေါ်လိုက်သည်။“…ဟဲ့…သေနာလေး….ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်လုပ်နေရတာလဲ…. …..ငမောင်…..”အခန်းတစ်ခုထဲမှအသားညိုညိုအသက်၂၅ နှစ်ခန့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တင်း လှပသူလေးတစ်ယောက်ထဘီရင်လျားခါ လက်မှဘီးတစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး ခေါင်းဖြီးရင်းထွက်လာသည်။အေးအေးမော်သည်မောင်မောင်နှင့်မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။မောင်မောင်သည်တောမှနေ၍ မြို့ကျောင်းလာနေခြင်းဖြစ်သည်။ယခုလည်း ကိုးတန်းအောင်စာရင်းထွက်သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲအောင်သဖြင့်ဝမ်းသာအားရစွာ အိမ်သို့ပြန်လာခြင်းပင်။“….ကျနော်စာမေးပွဲအောင်တယ်ဗျ…ဟားဟား….”“…..ဟဲ့….ဟဲ့….ငမောင်….နင်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်…..”“….ဟားဟား….ပျော်လွန်းလို့ခင်မျာ……ဝမ်းသာလွန်းလို့ကိုယ့်အမကိုယ်ဖက်တာဘဲဟာ……..”မောင်မောင်သည်ဝမ်းသာအားရစ …
မောင်မောင်ထန်ရေး သည်။ ကျ နော့်နံမယ်က တိုး ဇော်ပါ…။ကျ နော်က မွေး ချင်း မောင်နှမ မ ရှိတဲ့ တ ဦး တည်း သော သား တ ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်..။ ကျ နော့်အ ဖေ နဲ့ အ …
မနက်မိုးလင်းတော့ ကျွန်မကိုကြီးမျက်နှာကိုတောင် ရဲရဲမကြည့်ဝံ့ပါဘူးရှင်။ သူပဲသိသွားမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေကြောင့်ပေါ့။ကိုကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပါဘဲလေ။ထုံးစံအတိုင်းအေးတိအေးစက်နဲ့ပေါ့။ သူကသာ နေနိုင်တာ မနေနိုင်သူကတော့ ကျွန်မပေါ့။ ကိုကြီးနဲ့ချစ်ခြင်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်၊မောင်နှစ်မဝမ်းကွဲဆိုတဲ့ အသိ စိတ်က တစ်ဖက် နဲ့လွန်ဆွဲနေကာ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက်နဲ့မို့ အလုပ်လုပ်နေတာတွေ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်နေရပါတယ်။ မောင်နှမဝမ်းကွဲအချစ်ဇာတ်လမ်း တစ်နေ့သောအခါရန်ကုန်မြို့နဲ့များစွာမဝေးလှသောဆင်ခြေဖုန်းဒေသရှိအိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်၏ရှေ့တွင်တက္ကစီတစ်စင်းဆိုက်ရောက်လာကာကားပေါ်မှအသက်၂၅နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးအထုပ်အပိုးတွေနှင့်ဆင်းလာပါသည်။ထိုလူငယ်လေးသည်ကားခကိုရှင်းပေးရင်းအထုပ်အပိုးများကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်မနိုင်မနင်းဆွဲလာကာ အိမ်ရှေ့ အရောက်တွင်“ မေမေရေ..မေမေ..သားပြန်လာပြီ …
ကျွန်တော်အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်တုန်းကပါ။အဖေ့ဘက်ကတူမတယောက်ဒီမှာကျောင်းလာတက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့အဖေကအိမ်မှာပဲလာနေခိုင်းပြီးကျောင်းတက်စေလိုက်တယ်။အိမ်မှာကလဲလူဦးရေနည်းတော့အခန်းလွတ်တွေကအများ ကြီးလေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ကဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေဆိုပေမယ့်အနေစိမ်းတဲ့လူတွေချင်းအခုမှတွေ့ကြတာဆိုတော့စိမ်းနေကြတယ်။ စကားလဲသိပ်မပြောဖြစ်ကြဘူး၊ရောက်စမှာပေါ့လေ။ သူကျောင်းစတက်ရတဲ့နေ့ရောက်လာတော့သူ့ကိုကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျောင်းကြို၊ကျောင်းပို့လုပ်ပေးဖို့ အဖေကကျွန်တော့်ကိုခိုင်းတယ်။ အဲဒါနဲ့သူကျောင်းစတက်တဲ့နေ့ကစပြီးအကြို၊အပို့လုပ်ပေးနေရတော့တယောက်နဲ့တယေက်ကရင်းနှီးလာတယ်။စကားအပြောဆိုလေးတွေကနေပြီးအစအနောက်လေးတွေရှိလာ တယ်။ အိမ်မှာကအဖေနဲ့အမေရယ်ကတခန်း၊ညီမလေးကတခန်း၊အိမ်အောက်ထပ်မှာနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စစကတည်းကအိမ်ပေါ်ထပ်ကစ်ိတ်ကြိုက်ရွေးထားတဲ့အခန်းလေးမှာနေတာပေါ့။သူရောက်လာတော့အောက်ထပ်မှာအခန်းလဲမရှိတော့တာရယ်၊တယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်ဆိုပြီးရယ်အိမ်အပေါ်ထပ်မှာသူ့အတွက်တခန်းစီစဉ်ပေးတယ်ကျွန်တော့်အခန်းကိုသွားချင်ရင် သူ့အခန်းရှေ့ကဖြတ်ရတယ်။ တခါတလေတံခါးလေးဟနေတာမျိုးတွေ့တော့ တစေ့တစောင်းကြည့်မိတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အခန်းထဲတော့ကျွန်တော်မဝင်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းရင်းနှီးလာတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်တက်လာချိန်မျိုး သူ့အခန်းဖွင့်ထားတာနဲ့တွေ့ရင် အခန်းထဲဝင်ပြီးစကားဝင်ပြောတာမျိုးရှိလာတယ်။အေးဆေးပဲလေ။ အိမ်ကလူတွကလဲ သူနဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီး ဘာမှအထွေအထူးမပြောဘူး။ တနေ့တော့ ကျွန်တော်အခန်းထဲကအထွက် သူ့အခန်းရှေ့ကဖြတ်တော့တခါးလေးဟထားတာတွေ့တော့ ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလား ဆိုပြီးမေးမလို့တခါးကိုအသာလေးတွန်းအဖွင့်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက သူကအခန်းဝကိုကျောပေးပြီးအထက်ပိုင်းဗလာနဲ့ရေသုတ်နေတယ်။အဲဒီလိုမြင်တော့ကျွန်တော်လဲမနေနိုင်ဘူး။ တံခါးကိုမြင်ရရုံလောက်လေးအသာပြန်စိပြီးချောင်းကြည့်နေလိုက်မိတယ်။ …
ဒေါ်မြင့်မြင့်သွယ်က သံပန်းတံခါးကို လူပ်ကိုင်ရင်း အိမ်ထဲသို့လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။‘စုစုရေ…စုစု’ ‘ရှင်၊ လာပါပြီအန်တီသွယ်’ ပြောသံနှင့်အတူ အသက်၁၃နှစ်ခန့် မိန်းခလေးတဦးအိမ်ရှေ့သို့ ပြေးထွက်လာသည်။ ‘ဘာလုပ်နေလဲ စုစု’ ‘မီးပူတိုက်နေတာပါ အန်တီသွယ်’ မိန်းကလေးက ရိုသေစွာပြန်ဖြေရင်း တံခါးသော့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်လေသည်။ ဒေါက်မြင့်မြင့်သွယ်က လက်ဆွဲအိတ်ကို ဆွဲလျှက်သူ့အခန်းတွင်းသို့ ဝင်သွားလေရာ စုစုလည်းတံခါးကိုပိတ်၍ သော့ခတ်ကာ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ဝင်သွားလေသည်။ …
းခိုင်တစ်ယောက် ဦးလေးအိမ်၌ နေရင်း ကျောင်းတက်ကာ ဘွဲ့ရခဲ့သည်..။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်းဆုံးပါးသွားကြပြီမို့ ကျောင်းပြီးတော့ ရွာမပြန်ဖြစ်တော့ပဲ ဦးလေးနှင့် အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်..။ဦးလေးဖြစ်သူကလည်း လူပျိုကြီး..။ ဦးလေးနှင့် အတူ နေထိုင်ရင်း နှစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် ဦးလေးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရာ တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ပြီး အိမ်ကို တစ်ခြမ်းပိုင်းကာ အိမ်ငှားခေါ်တင်ထားခဲ့သည်..။အိမ်ငှားနေသော မိသားစုမှာ ပန်းအိဖြူ ဆိုသော …
ပုံ့ သည် ကျောင်းက ပြန်လာတာ နဲ့ သူ့ ကွန်ပြူတာ ဆီ ပြေး ကာ အီးမေးလ်ကို ဖွင့်ကြည့် သည် .. ။အိပုံ့ သည် ဘိန်းစွဲနေတဲ့ လူ လို ဖြစ်နေပြီ . .။ အိပုံ့ . သည် …
၁၉၃၈ ဇူလိုင် ၂၆ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားသော ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းအပြီး အချိန်ကာလများမှ စတင်ကာ မြန်မာ ပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် တစတစနှင့်ပင် တည်ငြိမ်မှု ကင်းမဲ့လာခဲ့သည်။ဂျပန်တို့သည်လည်း ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ပြီး ကမ္ဘာစစ်ကြီးထဲသို့ ဝင်ရောက် လာခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ဂျပန်တို့သည် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဗုံးကြဲလေတော့သည်။ …
ကျွန်တော့် ဘဝ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး လူပျိုရည် ကို စုပ်ယူ သောက်သုံးခွင့်ရလိုက် တဲ့ ကံထူး တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် က ပညာတတ် အင်ဂျင်နီယာ မမ တစ်ယောက်ပေါ့ အသက် က ၃၄ နှစ် နာမည်က ချိုရီခိုင် အပျိုကြီးမမ သူ့အကြောင်း …
ဒေါ်လေး မမြခိုင်ထူးသာ ရဲ့ လိင်ကိစ္စ လက်တွေ့ အတွေ့ အကြုံက စောသည်ပဲ ခေါ်ရမလား ထူးသာ ကိုးတန်း လောက်မှာ စသည်၊ ထူးသာက ၈တန်း လောက်မှာ စပြီး ဂွင်းတိုက် တတ်နေပြီ၊ သူတို့ အတန်းထဲ က ကောင်မလေး တွေ ထဲ …